Ahoana ny fomba hamahana ireo olana tsy miasa ao amin'ny Hulu? - Ahoana No
36 tapitrisa mahery, ilay goavambe mikorianaHuludia iray amin'ireo sehatra streaming lehibe indrindra manerantany. Miaraka amin'ny tobin'ny mpampiasa goavambe sy ny atin'ny atiny dia mora tohina sy hadisoana izy io.Amin'ity lahatsoratra ity dia mifanakalo hevitra momba ireo lesoka ireo izahay sy ny fomba fanamboarana izany amin'ny tenanao mba tsy hiandrasanao hanome fahafaham-po ny fanirianao ny atiny lehibe rehetra hatolotr'i Hulu.Noho izany, tsy mila miandry intsony, andao hiditra ao.
Inona avy ireo fanamboarana hulu mahazatra?
Ny lesoka dia miseho amin'ny Hulu amin'ny ankapobeny noho ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana Internet na raha misy ny olana amin'ny mpizara streaming na ny fitaovana anafihana an'i Hulu. Ity ambany ity ny lisitry ny fanamboarana azonao andramana, hamahana olana.
Zahao ny fifandraisana Internet amin'ny fitaovana.
Hamarino raha havaozina ny fampiharana Hulu.
Hamarino raha havaozina ny OS an'ny Fitaovana Streaming
Zahao ny satan'ireo fitaovan'ny tambajotra an-trano.
Miezaha hamerina ny fitaovana Streaming na koa ny fitaovana tambajotra an-trano
Andramo averina apetraka indray ny app Hulu.
Olana tsy miasa i Hulu - Mety hamboarina
1. Hulu Error code 3 & 5
Samy diso ny lesoka 3 sy ny lesoka 5 rehefa misy karazana olana amin'ny fifandraisana Internet amin'ny fitaovana streaming. Mipoitra izy io rehefa tsy afaka milalao atiny sy buffer i Hulu.
Fomba hanamboarana ireo lesoka ireo:
Atsaharo ny fitaovana streaming. Andramo esory ny fitaovan'ny tambajotra an-trano ary ampifandraiso izany.
Manandrama mampifandray ny fitaovanao amin'ny tamba-jotra an-trano amin'ny alàlan'ny fifandraisana misy tariby fa tsy tariby. Taorian'ny nahavitanao ireo dingana roa ireo ary mbola misy ny lesoka, ny vinavinany dia mipoitra ny lesoka noho ny rindranasa Hulu na ny System Operating tsy vaovao.
Mitadiava fanavaozam-baovao ary alao antoka fa samy navaozina ny fampiharana sy ny OS.
2. Amboary ny kaody 16 an'ny Hulu (olana amin'ny faritra tsy mety)
Hulu ihany no manome serivisy any Etazonia sy Japon. Mipoitra ny kaody fahadisoana 16 rehefa hitan'i Hulu a VPN ampiasaina hampiasa azy io. Indraindray ny zava-mitranga dia ny olona avy any ivelan'ny USA & Japan manandrana miditra Hulu amin'ny alàlan'ny serivisy proxy. Amin'izay dia hitan'i Hulu ity hetsika ity ary nanipy kaody 16 Error izy.
Fa raha any amin'ny faritra misy Hulu ianao ary mbola mahazo an'ity lesoka ity, ny vinavinany dia mieritreritra i Hulu fa mampiasa VPN ianao dia tsy maintsy mamono ireo fikirana proxy fotsiny.
Ahoana ny fomba famonoana ny fikirana proxy amin'ny fitaovana Android:
Mandehana any amin'ny setting> Wifi & Internet> Tsindrio ny 'Gear icon'> vonoy ny setting ho an'ny 'VPN Mandrakizay.
Ahoana ny fomba famonoana ny fikirana proxy amin'ny fitaovana iOS:
Mandehana any amin'ny Settings> Tsindrio ny 'Wifi'> Tsindrio ny 'icon boribory manga'> Tadiavo ny safidy 'proxy HTTP'> apetaho 'off'.
Raha na dia aorian'ny fanaovana ireo dingana ireo aza dia misy ny olana, ireto misy dingana vitsivitsy hafa hanandramana hanandramana.
Andramo mivezivezy amin'ny fifandraisana Wifi hafa
Andramo mivezivezy amin'ny angona sela.
Raha misy amin'ireto asa roa ireto dia inoana fa ny Wifi izay nifandraisanao taloha dia tsy maintsy nampiasa proxy mangarahara. Azonao atao ny mifandray amin'ny mpanome tolotra tambajotra anao amin'ny fanamboarana azy.
3. Amboary ny kaody hadisoana Hulu 400
Ny kaody hadisoana Hulu 400 dia nateraka rehefa misy olana kely ny fampahalalana mifandraika amin'ilay kaonty.Mba hamahana ny olana amin'ity olana ity dia azonao atao ny mametaka ny fampiharana na manala ilay fitaovana amin'ny kaonty.
Ahoana ny fanesorana fitaovana amin'ny kaonty Hulu:
Midira ao amin'ny Hulu avy amin'ny tranonkala iray.
Tsindrio ny mombamomba anao izay ho eo an-tampon'ny ankavanan'ny varavarankely, eo akaikin'ny safidy fikarohana ary kitiho ny 'Account'. Tsindrio izao amin'ny 'Manage fitaovana'.
Aorian'ny fikitihana ny fitantanana fitaovana dia hahazo lisitry ny fitaovana misy fidirana amin'ny Hulu ianao, avy amin'ity lisitra ity, dia tadiavo ilay fitaovana mahazo ny kaody 400 diso.
Tsindrio ny safidy 'Esory' izay ho eo alohan'ny anaran'ny fitaovana.
Ity dia tokony hamaha ny kaody 400 diso.
4. Amboary ny kaody fahadisoana Hulu 500
Error 500 an'ny Hulu dia olana mifandraika amin'ny mpizara. Ity lesoka ity dia nateraka tamin'ny ankamaroan'ny fampiasana ny tranokala Hulu fa ny mety hahitanao an'ity hadisoana ity na dia eo amin'ny fampiharana azy ireo aza ianao.
Tsy misy na inona na inona azonao atao hanamboarana io hadisoana io hatramin'ny farany. Ny hany azonao andramana dia ny fampiasana ny tranokala avy amin'ny tranokala hafa na fitaovana streaming hafa.Soso-kevitra ihany koa ny hijerena ny fifandraisanao amin'ny Internet raha toa ka miseho io hadisoana io.
5. Amboary ny kaody hadisoana Hulu 5003
Error 5003 an'ny Hulu dia olana mifandraika amin'ny playback. Mipoitra ity lesoka ity rehefa misy olana amin'ny app Hulu na ilay fitaovana streaming.
Fomba hanamboarana ity lesoka ity:
Vaovao farany ny fampiharana Hulu
Atsaharo ny rindranasa Hulu
Zahao ny fanavaozana ny OS an'ny fitaovana Streaming ary tazomy hatrany.
Atsaharo ny fampitaovana nataonao.
6. Amboary ny lesoka atiny voaaron'ny Hulu
Kaody hadisoana mifandraika amin'ny fiarovana ny atiny ao amin'ny Hulu dia ny ‘3307, 3321, 3343, 3336, 0326, 3322, 2203.’Ny lesoka atiny voaaro dia nateraka rehefa manandrana mijery atiny voaaro amin'ny fitaovana tsy tohanana ny mpampiasa.
Atsofohy ao anaty monitor anao ny tariby HDMI. Hamarino tsara fa tsy tariby VGA izany.
Raha sendra manana fikirana fanaraha-maso marobe ianao. Esory ny monitor faharoa.
Hanavao ny browser-nao Internet.
Hamarino tsara fa tsy ao anaty fomba fatoriana ny solosainao.
7. Amboary ny lesoka Hulu HDCP
HDCP dia fanafohezana ny fiarovana avo lenta nomerika nomerika. Ny HDCP dia mety hitranga raha mampiasa fampisehoana ianao, izany hoe monitor na fahitalavitra efa lany andro ary tsy afaka mifandray amin'ny fitaovana nohavaozina. Mety hitranga ihany koa izany rehefa misy olana mifandraika amin'ny tariby HDMI.
Fomba hanamboarana ny lesoka HDCP:
Esory ny tariby HDMI na amin'ny fitaovana streaming na amin'ny fampisehoana
Vonoy tanteraka ireo fitaovana roa ireo
Avereno ampifandraiso ireo tariby HDMI amin'ireo fitaovana roa ireo
Atombohy ny fitaovana Streaming sy Display
8. Hulu fahatapahana sy hadisoana kaody BYA-403-007
Ny lesoka Hulu BYA dia mifandraika amin'ny olana amin'ny playback. Ireo lesoka ireo dia valin'ny olana hatramin'ny faran'ny Hulu.Mba hamahanana an'ity lesoka ity dia andramo jerena ao amin'ny Hulu ny atiny hafa, raha azo lalaovina ny atiny hafa dia famantarana izany fa miaina fahatapahana misy fiantraikany amin'ny atiny sasany ny mpizara Hulu.Raha tsy azo lalaovina ny atiny rehetra dia mila miandry an'i Hulu hanamboatra ny fahatapahana fotsiny izy ireo amin'ny farany.
1Q. Ahoana no fanavaozana an'i Hulu amin'ny fahitalavitra mahira-tsaina?
taona:Ho an'ny torolàlana tsikelikely hanavaozana an'i Hulu amin'ny karazana fahitalavitra manan-tsaina. FITSIDIHANA Eto
2Q. Afaka mahazo an'i Hulu ve aho raha mitety faritra tsy misy azy io?
taona:TSIA, tsy afaka miditra any Hulu ianao any amin'ny faritra misy azy io na dia teratany amerikana na japoney ianao. Mila miditra amin'ireo firenena roa ireo ianao.
3Q. Aiza no hijerena ny fampifanarahana fitaovana?
taona:Azonao atao ny manamarina raha mifanaraka amin'ny Hulu ny fitaovanao na tsia Eto
4Q. Ohatrinona ny vidin'i Hulu?
taona:Ny drafitra Hulu dia manomboka amin'ny 5.99 USD ka hatramin'ny 54,99 USD. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny vidiny ianao fipihana eto.
Satria BIg no serivisy mivantana, ny lisitry ny lesoka ananany dia tsy vitsy koa. Saingy manana ny torolàlana tsikelikely ianao hanampy anao amin'ny karazana lesoka rehetra izay aterak'i Hulu anao. Ny fanarahana tsara ny torolalanay dia hanampy anao hamaha ny olana amin'ny fotoana fohy, afaka mankafy ny atiny tianao indrindra ianao nefa tsy mila miandry olon-kafa ho avy handamina ireo olanao.
Ny My Chemical Romance, Paramore, sy ny maro hafa dia hanao fampisehoana amin'ny Fetiben'ny Pop Emo Fony Izahay Tanora!
mandefasa sarimihetsika vaovao an-tserasera maimaim-poana
ny lokon'ny famadihana vola
ahoana no hamafana ny kaontiko reddit
misintona sarimihetsika an-tserasera sarimihetsika feno maimaim-poana
Afaka mijery sarimihetsika vaovao an-tserasera ve aho?
minecraft optifine ny fomba fametrahana